Cabashooyinka barakacayaasha abaaraha Muqdisho oo sii kordhaya.
Muqdisho 22 Sep, 2011Qaar ka mid ah qoysas barakacayaal ah oo ku sugan magaalada Muqdisoh oo ka cabanaya ineysan helin wax gargaar ah iyadoo qaarkoodna ay soo wajahday xaalad caafimaad darro. Qoysaskan oo deggan dhismihii hore ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya in muddadii ay ku noolaayeen xeradaas oo ay iigu sheegeen ineyan muddo sanad ah helin wax gargaar ah.
“Intii ehel ah ee meesha aan wada joogno waan rafaadsannahay wax aan heysanno ma laha, deyn ayaa la igu lee yahay ilmaha wax aan u haayo ma laha hayadaha gargaarka sida Turkiga waxaan ka cosanaynaa in nala gargaaro” Sidaasi waxaa ii sheegtay iyadoo murugo la hadli la’Xabibo Cali oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool dhismihii safaaraddii hore ee Mareykanka ku lahayd magaalada Muqdisho.
“Waxaan abaarta darteed uga soo barakacay degmada Ceel Buur ee gobolka Galgaduud, halkaan markaan imid ma jirto wax deeq ah oo aan helnay, biyo la’aan, cunto la,aan ayaa halkaan nagu haysa, mararka qaarkood waxaan dharka u soo dhaqnaa reeraha halkaan deggan, mana nagu filna waxaan ka soo helnaa, waxaan walaalaheen ka codsanaynaa in ay gargaar nala soo gaaraan” sidaasi waxaa Radio Ergo u shegtay hoyo lagu magacaabo Deeqo Xuseen Maxamed oo ka mid ah qoysaskaas. Sidoo kale aabbe lagu magacaabo Cabdule Axmed wuxuu ka mid yahay qoysaska ka sheeganaya in lagu hilmaamay xeradaas, waxa aan weydiiyay sababta loo soo gaarsiin waayay gargaarka waxa uu yiri” Ma garan karo sababta naloo soo gaarsiin waayay tan iyo ciiddii Carrafo ee sanadkii hore la soo dhaafay wax gargaar ah ma anaan helin”.
Waxaa sii kordhaya cabashooyinka iyo caafimaad darada ka soo yeeraysa qoysaska barakacayaasha ee ku sugan xeryo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho.Dhamaad.
Sacdiyo M. Nuur – Muqdisho Faallooyin